नारी नै नारीका बाधक « Anumodan National Daily
नारी नै नारीका बाधक
नारीहरू निक्कै समय हेपिए । अहिले पनि धेरै महिला हेपाई, चेपाई र विभिन्न खालका हिंसाबाट प्रताडित छन् । वास्तवमा भन्ने हो भने महिलाहरूका पीडाका कथाव्यथा अनगिन्ती छन् । कति कथा सार्वजनिक हुन्छन्, कति हुँदैनन् ।
म आज अलिक फरक प्रसंगमा छलफल गर्न खोजिरहेकी छु । वास्तवमा महिला दिवसको औचित्य ठूलो छ । यो मनाउन थालिएको पनि एक शताब्दी हुन थालेको रहेछ । यति भन्दाभन्दै पनि म महिलाहरूले धेरै सुधार गर्नुपर्ने देखेकी छु । महिलाका पीडा धेरैले लेखेका छन्, तर म महिलाले दिने पीडाबारे छलफल गर्न खोजिरहेकी छु ।
म सानो हुँदाको अनुभव छ– बाघले गोठबाट बाख्रा लैजान खोज्दा मेरो आमा आत्तिदै कराउनु भयो, ‘बाघ आयो, बाघ आयो ।’ हल्ला सुनेपछि अर्को कोठामा रहेका अंकल मम्मीको सहयोग गर्न बाहिर आउन खोज्नुभयो, तर आन्टीले मान्नु भएन । ‘बाघले हजुरलाई खायो भने के हुन्छ ? खायो भने त्यही फलानाकी आमालाई खाओस् ।’ आन्टीको दवाव र झगडामा अंकल बाहिर आउन सक्नु भएन । मैले उहाँहरूको झगडा सुनिरहेकी थिए । संयोगले अजिंगर जस्तो श्यामे कुकुरको भुकाई र आमाको कराइले न बाघले मेरो आमालाई झम्टन सक्यो न बाख्रो लग्न सक्यो ।
यो कथा २५ वर्ष जति अघिको हो । तर म आधुनिक मानिने पढे लेखेका, अझ शहरिया भन्ने महिलामा अहिले पनि मेरो आन्टीकै सोच देख्छु । महिलाहरू बरु पुरुषको विश्वास गर्लान्, तर आफ्नै दिदीबहिनीलाई सहयोग गर्न तयार हुँदैनन्् ।
हामी महिला पछाडि पर्नुका पछाडि पुरुषलाई मात्रै बाधक देख्छौं, तर महिला पछि पर्नुमा स्वयं महिला नै बाधक देख्छु । तीन छोराछोरी भएका मेरा ४५ वर्षीय दाजु हुनुहुन्छ । हाम्रो छिमेकमा विभिन्न कारण एकल भएका धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ । तर दु:खको कुरो मेरो भाउजू ती छिमेकी महिलासँग बोल्नु त के, संयोगले अनुहार देखादेख हुँदा पनि त्यसलाई किन हेरेको भनेर झगडा गर्नु हुन्छ ।
मेरो एकजना सँगै पढेको केटा साथी छ । तर, उ कहिल्यै मसित मात्रै होइन कुनै पनि महिलासित फोटो खिच्न मान्दैन । धेरै भएपछि एकदिन सोधे– किन मसित तस्बिर खिच्दैनौं ? उसको पीडा पनि मेरो दाजुको जस्तै रहेछ । त्यो साथीले भन्थ्यो– मैले श्रीमति बाहेक अरू कुनै महिलासित शारीरिक सम्बन्ध राखेको छैन । उसलाई जैले पनि ‘महिलासँग बोल्दै नबोल्नु, केटी वा महिलासँग कुनै सम्पर्क नराख्नु’ भन्ने श्रीमतिको आदेश रहेछ । अचम्म त के भने ऊ मेरो मात्रै होइन आफ्नै दिदीबहिनीको फेसबुक साथी पनि छैन । भन्थ्यो– ‘तिमीहरूसँग फोटो खिचांै, केही गरेर फेसबुकमा फोटो गयो भने घरमा झगडा हुन्छ । घरको शान्ति खलबल्याउनु भन्दा फोटो नखिच्नु नै राम्रो ।’
आखिर महिलाको सोच कहाँ छ ? बिग्रनेहरू घरमै बसेर बिग्रेका छन् । अनि कुनै महिलासँग बोल्दैमा, फोटो खिच्दैमा अथवा फोन गर्दैमा मेरो साथी बिग्रन्छ ? के महिलाहरू उसित सम्पर्क राखौला भनेर पर्खेका हुन्छन् र ? या मेरो त्यो केटा साथीले चाहँदैमा कोही महिला उसित सम्पर्क गर्न तयार हुन्छ र ? सेक्स र प्रेम एउटैले मात्रै चाहेर सम्भव छ र ? उसले भन्थ्यो–‘१० वर्ष भयो श्रीमतिलाई त्यो सानो सोचबाट बाहिर ल्याउन खोजेको, तर सकेको छैन र सक्छु भन्ने विश्वास पनि हटिसक्यो ।’
हो, बलात्कारमा धेरै महिला परेका छन् । त्यसका पनि म दुईवटा कारण देख्छु । एउटा यहाँ सेक्सलाई धेरै ठूलो मान्नु र अर्को हामी महिलाको भड्किलो लवाइखवाई हो । नेपालमा सेक्सका लागि खास क्षेत्र तोकेको भए सायद बलात्कार कम हुन्थे होलान् । यहाँ त कसैसित मन मिल्दा पनि सेक्स गर्न पाइँदैन । होटलमा जाँदा हप्ता असुली नभएको होटलमा प्रहरीले छापा मारिहाल्छ । अनि त्यो चाहना कतै न कतै पोखिन्छ नै । त्यसैले नेपाल जस्तो देशमा भड्किलो कपडा लगाउन जरुरी छैन ।
यूरोप, अमेरिका तथा कतिपय एसियाली मुलुकमा पनि सेक्सका लागि विशेष क्षेत्र तोकिएका छन्, त्यसैले बलात्कारका घट्ना सुनिदैनन् । ती देशमा अर्धनग्न रूपमा महिला हिडिरहेका हुन्छन्, तर खोई बलात्कारका घटना ?
म त भ्रष्टाचार लगायत आर्थिक दुराचारमा पनि महिलालाई नै बढी दोषी देख्छु । हरेक महिलाले श्रीमानलाई गरगहना, आधुनिक घर, मोटरकार आदिका लागि दवाव दिइरहेका कारण पुरुषले बाध्य भएर गलत बाटो समात्ने गरेका छन् ।
म छाउपडी प्रथा र जातीय छुवाछूत मान्दैन, तर हाम्रो घरमा हामी महिलालाई छुट्टै बसाउने काम महिलाहरूले नै गर्छन् । पढेका महिला पनि त्यही प्रथा मान्छन् । जबकी पुरुषहरूलाई कुनै वास्ता हुँदैन । कोही दलित साथी आउँदा घरभित्र पस्न नदिने, दही, दूध नदिने पनि हामी महिला नै हुन्छौं । छोरीलाई कुनै पुरुषसँग नजिक हुन हुन्न भन्ने गलत मन्त्र सिकाउने पनि हामी महिला नै हौ ।
त्यसैले नारी दिवसकै दिनदेखि हामी महिलाले आफैले आफैलाई सुधारौं । अर्को महिला वा पुरुषलाई पनि विश्वास गर्न सिकौं । त्यसपछि मात्रै महिला दिवसको सार्थकता हुन्छ । गलत महिला पनि छन्, पुरुष पनि छन् भन्ने बुझौं । त्यसैले गलत गर्ने पुरुषको मात्रै होइन महिलाको पनि विरोध गरौं ।